ငါကအိန္ဒိယလူမျိုးပါ၊ ကျွန်တော့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဘင်ဒီဝတ်ထားရင်အဖြူမဆေးပါနဲ့ - သတင်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း bindis သည်အနောက်နိုင်ငံများတွင်အထူးသဖြင့် Coachella ကဲ့သို့သောပွဲတော်များတွင်ခေတ်မီသောဖက်ရှင်ဆိုင်များဖြစ်လာသည်။ Vanessa Hudgens, Selena Gomez နှင့် Ellie Goulding တို့လိုနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေတောင်မှသူတို့ကိုဂီတဗီဒီယိုတွေမှာ ၀ တ်ဆင်ပြီးဖက်ရှင်သင်္ကေတအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ကြတာ။
အနောက်တိုင်းကမ္ဘာကသူတို့ကိုယ်သူတို့အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပြောကောင်းပြောနိုင်ပေမဲ့၊ သူတို့တကယ်လုပ်နေတာကအေးဆေးစွာဖက်ရှင်ကျသောပုံစံကိုအမှန်တကယ်နားမလည်ဘဲအဓိပ္ပာယ်နက်နက်နဲနဲနားမလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအတွက်မည်သည့်သက်ရောက်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ မရှင်းပြဘဲစကားလုံး 'ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင့်လျော်မှု' ဟူသောစကားလုံးသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့က 'မျက်နှာရတနာ' မဟုတ်ပါဘူး
ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မယူပါနဲ့ - ငါအားလုံးအခြားလူများရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ခံနှင့်အခြားသူများနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကိုမျှဝေဘို့အားလုံးပေါ့, ဒါပေမယ့်တန်ဖိုးထားတ ဦး တည်းအရာနှင့်သင့်လျော်သောအခြားဖြစ်ပါတယ်။ Selena Gomez သည်သူမ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ဘင်ဒီ၏နောက်ကွယ်ရှိအဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုသိသည် လာယူပါ ဂီတဗီဒီယို။
ဘင်ဒီ၏နောက်ကွယ်ရှိသမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာမှာထူးခြားပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာသည်။ ၎င်းသည် ၀ တ်ဆင်သောမိန်းမ၊ ယောက်ျားတိုင်းအတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်၎င်းကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်္ကေတ (tilak ဟုခေါ်သည်) အဖြစ်မကြာခဏ ၀ တ်ဆင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်နဖူး၌ ၀ တ်ဆင်ထားပါကလက်ထပ်ခြင်း၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ လည်ပင်း၏အောက်ခြေတွင် ၀ တ်ဆင်ထားလျှင်ကွယ်လွန်သူခင်ပွန်းကိုရိုသေလေးစားခြင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစကိုကိုယ်စားပြုတယ် ajna chakra ငါတို့၏အတ္တကိုဆုံးရှုံးကာမြင့်မားသောဝိညာဏဝိညာဏအဆင့်သို့ရောက်သောနေရာတွင်ဝိညာဉ်ရေး 'တတိယမျက်လုံး' ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး bindi ဝတ်ထားကိုလည်းစိတ်ကိုမျက်စိကတဆင့်ဝtheာကိုကြည့်ဖို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်သတိပေးသည်။ ဒါဟာဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ထက်အများကြီးပိုပါတယ် - ကမြင့်မြတ်သောဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းသင်္ကေတပါပဲ။ လူများက၎င်း၏အရေးပါမှုကိုတန်ဖိုးထားလေးစားခြင်းမရှိပါက, ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့, ကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင့်လျော်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ bindi ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဟိန္ဒူလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပဲဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်လာဖို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာအမှန်ပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးများသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများနှင့်ရောင်စုံကာတောက်ပသောဘင်ဒီများ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်မင်္ဂလာပွဲများနှင့်အခြားအထူးပွဲများကိုသူတို့၏အဝတ်အစားများဖြည့်စွက်ရန်ထက်အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမတက်ရောက်ကြပါ။
ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့သူတို့ဟာနောက်ကွယ်ကထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကိုနားလည်ပြီးလေးစားနေကြဆဲဖြစ်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူ့ရဲ့အရေးပါမှုဟာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူပွဲတော်များတွင်ဘီဒစ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသောလူဖြူများသည်မကျင့်သုံးကြပါ။ ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်နိုင်ငံခြားဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုကိုထူးခြားဆန်းကြယ်စေပြီးရိုသေလေးစားမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိအမြင်ကင်းမဲ့မှုကိုပြသနေသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကသီးနှံထိပ်နဲ့ Bum ဘောင်းဘီတိုတစ်စုံနဲ့ချိတ်လိုက်ရင်။
Sari မဟုတ်၊ ?
Selena Gomez (@selenagomez) မှမေလ ၂၂ ရက်၊ ညနေ ၁၀း၁၅ နာရီတွင်တင်ခဲ့သည်
ထိုသို့ဒီမှာပြtheနာဖြစ်ကြောင်းရုံ Bindis မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိန္ဒူသင်္ကေတများသို့မဟုတ်ဟိန္ဒူဘုရားများ၏ရုပ်ပုံများဖြင့်အ ၀ တ်အထည်ပစ္စည်းများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာများသည်မြင့်သောလမ်းစတိုးဆိုင်များတွင်ဖြည့်ထားသည်။ သင်ဟာဟိန္ဒူဘာသာဝင်မဟုတ်ရင်တီရှပ်အင်္ကျီကိုဘာကြောင့်ဝတ်သင့်သလဲ။ သငျသညျတစ်ခုလုံးကိုအဓိကကမ္ဘာ့ဘာသာတရားကိုမလေးစားကြောင်းစဉ်းစား? ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်ယင်း၏သင်္ကေတများကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းဖက်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ဘာသာတရားကိုသင်မလေးစားပါကဟိန္ဒူသင်္ကေတများမဝတ်ပါနှင့်။ 'om' တက်တူးတွေ၊ Ganesh ရှပ်အင်္ကျီတွေ၊ #culturelappropriation
- Meghana (@megsnewcar) ဇူလိုင်လ 14, 2015
သငျသညျ Coachella တက်သည်မှန်လျှင်ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်ဘင်ဒီ၏နောက်ကွယ်ရှိယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယ်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာနှင့်အတူဘင်ဒီကိုဝတ်ဆင်ထားလျှင်သင်သွားပါ။ သငျသညျအကွောငျးကိုကဘာလဲဆိုတာအဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးရှိပါကသို့သော်ကျေးဇူးပြုပြီးတ ဦး တည်းဝတ်ဆင်ကြဘူး။ နည်းနည်းအပိုတောက်ပနေမည့်အစား